Ụdị | Ka 2022
2022 | ẸNam Ekese Paul Adams | Atiya: Ụdị
Mgbe ọ hụrụ Meghan Markle ka ọ na -eyi akpụkpọ ụkwụ Vejas n'oge ọdịda ikpeazụ, otu onye edemede Glamor kwesịrị inwe ha. Nke a bụ ebe ị ga -ere ha ugbu a.
Emma Watson, Jessica Biel, Justin Timberlake, na Drake so na ndị ama ama gara asọmpi Wimbledon nke afọ a.
Foto 8 nke nwa agbọghọ ụbọchị ọmụmụ Angelina Jolie na -ele anya dị ka nwata nwanyị ụbọchị ọmụmụ kacha
Ọmarịcha Angelina Jolie dị afọ 39 taa, m na-eme ememme site n'ịchịkọta ụfọdụ foto ebe ọ kacha yie nwa agbọghọ. Ejiji dị mma, ịmụmụ ọnụ ọchị, na ndị niile nọ ebe ahụ nwere obi ụtọ. Yabụ na agbanyeghị na nke ndị a sitere n'ememe ya n'ezie, ọ dabara ụkpụrụ m (obi ụtọ na ihe dị ịtụnanya) na nke ọ bụla. Uwe a na-eme ọmarịcha ụbọchị ọmụmụ nwa nwanyị (sequins na sparkly) na-arụkwa ọrụ na Angelina kwa, onye họpụtara LBD a maka mmalite nke Nnu laa azụ na 2010. Mana n'onwe m, ọ bụrụ na m bụ nwa nwanyị b-ụbọchị wee bụrụ kpakpando mega ihe nkiri. , M ga -awụpụ n'elu akwa oriri iji kwado ihe mara mma na ọkacha mma na ụgbọ oloko dị ogologo. Tinye nọmba chọkọletị a o yi na Cannes n'afọ 2011. Aga m ahụkwa mpaghara oriri na ọ involvingụ involvingụ nke gụnyere steepụ ka m wee nwee ọnọdụ dị mma maka igosi ya. Ọ naghị adị ka nwanyị ike na -agbagharị ebe ọmarịcha maka nri abalị na -atọ ụtọ na ọnụ ọgụgụ dabara adaba nke ojii a dabara adaba? Mana ọ bụrụ na amaara m Angelina (agbanyeghị, n'ezie, amaghị m), echere m na ọ ga -esoro ezinụlọ ya họrọ ụbọchị maka nri abalị mara mma n'afọ ọ bụla. Iberibe ndị rụrụ arụ, dị mfe, na ojii yiri ka ha mere mbinye aka ya n'ọrụ
31 Echiche Ejiji nke Jenụwarị, nke ndị editọ Glamor na -eme ya
Maka mbipụta nkwupụta onwe onye, ​​anyị nwetara ndị ọrụ Glamour 31 ka ha gwakọta ma jikọta ya na ihe ise ga-enwerịrị. Pịa ebe a ka ịhụ ihe ha pụtara!
Site na akpa Chloé crossbody ruo Chanel vinteji na -adịghị ahụkebe, lee akpa akpa Black Friday nke 2019 na akpa ego iji nyere gị aka ịzụ ahịa ezumike.
Ugg ji ụdị ọhụrụ a, mmiri na-egbochi mmiri dochie akpụkpọ ụkwụ atụrụ ya kacha ewu ewu
Akụkọ niile gbasara akpụkpọ ụkwụ atụrụ atụrụ mmiri na-adịghị ọcha na Ugg. Ugg na-akwụsị akpụkpọ ụkwụ kpochapụwo ya kacha ewu ewu nwere ụdị akpụkpọ atụrụ ọhụrụ nwere akwa dị mma na akpụkpọ atụrụ nke a na-emeso ka ọ bụrụ ntụpọ na mmiri na-egbochi mmiri.
Mgbe otu nwoke bidoro mewe uwe ya na ụdị ọmarịcha a na -edobekarị maka brackets bọọlụ efu, ana m ege ntị. Yabụ mgbe enyi di m nọrọ brunch ụbọchị Afọ Ọhụrụ na -agwa anyị etu ọ hụruru 'Ballroom Jeans' n'anya, m nọ na -eche ihe heck chọrọ uwe denim. Ha tụgharịrị, ha pụtara otu 'notherdị ụdị' Ballroom '... Zute ngwaahịa na-atọ ọchị nke m hụla kemgbe-Duluth Trading Co.'s Ballroom Jeans, nke nwere' Crouch Gusset 'nke nwere ikike maka' nnwere onwe. ngagharị. ' Enweghị ụzọ ị ga -esi kwuo nke a: uwe ogologo ọkpa a nwere ohere ọzọ maka nsị ya. Lelee mkpọsa mgbasa ozi ndị a na -atọ ọchị ịhụ ka ha na -eme ihe: M pụtara ... ị nwere ike? N'iburu n'uche na ọ bụ nsogbu nwoke pụrụ iche, enweghị m ike ikwu ma ọ bụrụ na ndị a bụ ihe nzuzu dịka m chere na ha bụ ... n'elu ihe? Ị chere na nwa gị nwoke ga -eyi otu ụzọ ndị a? Ka anyị nụ ya!
Madewell na -echeta ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ n'ihi okwu nchekwa
Ozi dị mkpa ma ọ bụrụ na ịzụtara akpụkpọ ụkwụ site na nchịkọta Madewell's Sightseer n'ime ọnwa isii gara aga: Ụlọ ọrụ a na -echeta otu abụọ na iri ise na US na Canada n'ihi okwu nchekwa. Dabere na WWD, akpụkpọ ụkwụ ika ahụ sitere na nchịkọta Sightseer, nke a na -ere n'etiti February na Julaị 2015, 'achọpụtala na ọ nwere ihe egwu n'ihi na igwe nwere ike chụpụ wee si na ala nke mpụga pụta, na -etinye ihe egwu ịdaba. na Ụlọ Ọrụ Nchekwa Ngwaahịa nke US. Enwebeghị mmerụ ahụ. A na -ere akpụkpọ ụkwụ ahụ n'ụlọ ahịa Madewell, n'ịntanetị na madewell.com, ma ọ bụ n'ịntanetị na shopbop.com, site na $ 60 ruo $ 80. Ụdị dị iche iche gụnyere: C0275 Sightseer Knotted Slide Sandals C0276 Sightseer T-Strap Thong Sandals in Black Leather C0277 Sightseer T-Strap Thong Sandals in Metallic Color-Block C0278 Sightseer Buckle Gladiator Sandals C0279 Sightseer Slide Sandals C1105 Sightseer Cris -Loop Sandals C5895 Sightseer Ankle-Wrap Sandals in Shiny Silver C5897 Sightseer Lace-Up Sandals C6090 Sightseer Ankle-Wrap Sandals na Metallic Sand Ọ bụrụ na ị nwere ụdị n'ụdị ndị a, kwụsị iyi ha ozugbo wee kpọtụrụ Madewell site na ịkpọ 866-544-1937 ma ọ bụ email na 24/7@madewell.com. Maka ozi ndị ọzọ, gaa na www.madewell.com wee pịa 'ọkwa dị mkpa.'
Ihe nzuzo ụdị ejiji oge okpomọkụ 15 ga -ezuru ụmụ agbọghọ nwere akụkụ
Echiche na-atọ ụtọ maka ụdị oge ọkọchị na akwa uwe gị.
Ma ị bụ onye na-eyi LBD nke na-eji ọ joyụ ma ọ bụ onye nwere mmasị na ihe kachasị mma, nke a bụ ebe ị ga-azụ ahịa maka akwa mmanya na-esote gị.
A bịa n'ụdị eze, e nwere ụmụ nwanyị ole na ole na -amaja onye ọ bụla. Kate Middleton, n'ezie, kamakwa Queens Letizia na Maxima, na Princess Mary. Nwaanyị ọ bụla bụ nnukwu ụdị ike n'obodo ya, mana ọ na -esiri anyị ike ịhụ ha ka ha niile na -ama mma. Nke ahụ gbanwere, ekele maka ọmarịcha oriri ọmụmụ ụbọchị iri asaa na ise maka Queen Margrethe II nke Denmark (mana ọ dị oke mkpa - tiara ndị ahụ!). Princess Mary amuru Australia mere emume ncheta ọmụmụ nne di ya na uwe mwụda pink nke dara n'ubu ya. Ọ bụrụ na ịmụrụ anya ya niile maara nke ọma, enwere ihe kpatara ya: O yi akụkụ ya na foto gọọmentị ya. Nwanyị nwanyị nke Spain Letizia na -aga n'ihu na -enwekwu ọmarịcha kemgbe e chiri ya echichi n'oge ọkọchị gara aga. Maka mmemme a, ọ pụtara na igbe siri ike, were uwe mwụda na-acha ọcha na ọcha. N'ịbụ onye amaara n'ụwa niile maka ụtọ ya, Queen Maxima enweghị ndakpọ olileanya n'uwe ojii ojii na ọtụtụ ola diamond. Princess Marie nke Denmark mere ụdị eze mara mma, na-eyi akwa ndị agha mmiri na aka aka. Kedu eze mara mma nke na-ahọrọ nke kachasị mma?
Ndị na -ere ahịa 19 dị egwu, ebe ọ bụ na ha bụ akụkụ kacha mma nke ekeresimesi, agbanyeghị
Nhọrọ nke ihe nkwakọba ngwaahịa, site na ịma mma ruo na ngwa ụlọ, ịzụ ahịa n'oge ezumike a.
Ugwu mmiri 50 ị ga -enwe ahụ iru ala na ntụkwasị obi n'oge ọkọchị a
Site n'otu iberibe gaa na bikinis, anyị ahụla ụdị akwa ịsa ahụ dị 50 nke dabara adaba nke ga-eme ka obi sie gị ike n'akụkụ osimiri.
Melite akwa uwe gị dara site na nchọta 20 a mara mma
Weta kọbọd gị n'ime ebe a ugbu a na ihe nchọta nke oge a.
Ekike oriri na ọ Afterụ Afterụ na-adọrọ mmasị n'ihi na, n'ezie, anyị na-elele ihe ndị ọkachamara họọrọ ka ha kporie ndụ, ọ bụghị naanị maka ịdị mma na foto kapeeti uhie. Ọ dị ka ọtụtụ ndepụta Grammys m yi uwe kacha mma gara n'ụlọ iji zuo ike, n'ihi na ahụghị m ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị ahụ na-apụ apụ. Kama nke ahụ, ihu abalị kacha mma nwere ihu ọhụrụ. Nnukwu nwanne nwanyị Kim Kardashian nwere otu n'ime uwe kacha amasị m site na isi ihe omume, mana ụmụnne nwanyị Kendall na Kylie Jenner na Khloe Kardashian mebiri ya ihe dị njọ ma emechaa. Ụmụ agbọghọ atọ a na -ama jijiji Kardashian M.O. nke ogologo ma na -amị amị na -agbada nke ukwuu na oghere dị elu. Ọ dịkwa mma ịmara: Ọ dị ka Kylie hapụrụ ihe ngosi Kim na nso nso a n'ụlọ maka mgbede. Uwe a nke Steven Khalil dị ka ụdị ụdị ọ kwara n'afọ gara aga. Rita Ora gbanwere uwe mwụda ọla ọcha ya na-egbuke egbuke, m ga-agwakwa gị: ọ na-amasị m nke silk Dsquared2 mini a na-ebipụta nke ọma. Olu a na -eme ka ọ bụrụ silhouette mara mma, ma ọ bụrụ na ị ga -eweghachi mmanya ole na ole wee gbaa egwu, echere m na anyị maara uwe kachasị dabara na ọrụ ahụ.
Etu ị ga-esi eyi uwe ogologo ogologo ma ghara ịdị ka onye na-agụ akwụkwọ (onye mmụọ na-ahụ maka mmasi kpaliri!)
Kedu ka ọmarịcha Glamor Web Intern, Lane Florsheim si lelee uwe mwụda oge ọkọchị?
Uwe kachasị mma na Teen Vogue's Young Hollywood Party: votu ugbu a!
Ndị na-eme ihe nkiri Hollywood na-abịanụ wee pụọ (n'ụzọ dabara adaba maka afọ!) Maka mmemme Teen Vogue kwa afọ n'abalị ụnyaahụ.
Ihe ngosi 9 na -egosi na ị bụ Aquarius mara mma
Maka ụmụ agbọghọ Aquarius Glamour: ụbọchị ọmụmụ ọma! Maka na ekwere m na e nwere ụfọdụ zodiac webbing nke na-ebute myirịta, ana m achịkọta ndepụta ga-abụ ihe m chere na ị zoro n'ime akwa ma ọ bụ akwa gị. Ozi ahụ na -abịa site n'ikike nke ịgụ kpakpando pro Susan Miller, onye biputere ụdị akụkọ dị egwu m nyochara (gbakwunyere, ọ bụ onye mara mma n'azụ vidiyo horoscope anyị dị ịtụnanya - lelee ha ma ọ bụrụ na ị kabebeghị!). Ọ bụrụ na ị bụghị onye Aquarius, lee akara ndị ọzọ m dere gbasara ha ebe a. Ị maara na ị bụ onye Aquarius ma ọ bụrụ na n'ime akwa gị ... 1. Enwere ụfọdụ acha anụnụ anụnụ na -acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ odo odo na -acha odo odo pinky. Maka Miss Miller, agba gị kacha mma bụ cobalt na fuchsia, ma ugbu a ị nwere ike ịnakọta iberibe ole na ole ị hụrụ n'anya. 2. Nkwupụta ọla na -aka nke ọma, iberibe dị mfe. Susan dere, 'Enwere ihe pụrụ iche gbasara nwanyị Aquarius, ọ na -adịkwa iche mgbe niile, na njedebe nke ihe dị ọhụrụ na nke na -ekpo ọkụ,' Susan dere, na mmetụta a na -emetụta uto gị na ọla. Ị bụghị nwa agbọghọ ahụ nwere eriri ọla edo dị gịrịgịrị ma ọ bụ mkpọtụ siri ike. Kama nke ahụ, olu olu mara mma na ihe na-ahụ maka m na mgbaaka mmanya na-ekwu na oghere dị na ngwa ngwa gị. 3. Ihe nwere njikọ teknụzụ.
esi edozi afọ gị
ọ bụ ihe na -ekwesịghị ekwesị iyi akwa ojii agbamakwụkwọ
nuface n'ihu na mgbe olu
revlon otu onye na -ehicha ntutu na igwe mgbapụta